Dastabej » एमसीसीः सत्ता गठबन्धभित्रै चरम मतभेद, ‘अघि बढाउन छलफल’ सरकारका प्रवक्ता
एमसीसीः सत्ता गठबन्धभित्रै चरम मतभेद, ‘अघि बढाउन छलफल’ सरकारका प्रवक्ता – Dastabej
एमसीसीः सत्ता गठबन्धभित्रै चरम मतभेद, ‘अघि बढाउन छलफल’ सरकारका प्रवक्ता
तस्बिरको क्याप्शन, एमसीसीका पदाधिकारीहरू अहिले नेपाल आएका छन्
अमेरिकी सहायता परियोजना मिलेनीअम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) लाई लिएर सत्ता गठबन्धभित्रै चरम मतभेद देखा परेको छ। अर्थ मन्त्रालयले सोधेका प्रश्नहरूबारे एमसीसीले दिएको जबाफप्रति नेकपा माओवादी केन्द्रका केही मुख्य नेताहरू असन्तुष्ट नै रहेपछि त्यसविषयमा गठबन्धनभित्र चिरा परेको देखिएको हो। माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले एमसीसीलाई लिएर गठबन्धन भत्काउने प्रयास भइरहेको बताएका थिए। नेकपा एमालेले साथ दिएमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमसीसी अघि बढाउन सक्ने ठानेर उनले त्यसो भनेको कतिपय ठान्छन्।
सरकारको तयारी के? यस्तो अवस्थामा अब एमसीसीबारे सरकारले के गर्छ? सरकारका प्रवक्ता एवम् कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की धेरै कुरा बोल्न नमिल्ने बताउँछन्। उनले सङ्क्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै भने, “एमसीसी अगाडि बढाउन छलफल चलिरहेको छ।”
तस्बिर स्रोत,NEPALI EMBASSY USA तस्बिरको क्याप्शन, सन् २०१७ मा एमसीसी सम्झौतामा नेपालले हस्ताक्षर गरेको थियो
सरकार संसद्‌बाट पारित नहुने गरी एमसीसी अघि बढाउने पक्षमा नरहेको बताइएको छ। त्यस्तो अवस्थामा उसलाई गठबन्धन वा नेकपा एमालेको साथ चाहिन्छ।
कतिपय नेताले खुला रूपमा विरोध गरिरहे पनि एमालेले अझै मुख खोलेको छैन। एमसीसीको प्रतिनिधिमण्डलले बिहीवार नै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग उनकै निवासमा भेट गरेको थियो। भेटमा सहभागी नेता सूर्य थापाका अनुसार सरकारले नै एमसीसीबारे केही कुरा नगरेकाले एमाले आफै अघि बढ्न आवश्यक नरहेको धारणा अध्यक्ष ओलीले राखेको जानकारी दिए।
ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै उनले भने, “सरकारले पहिले एमसीसीबारे आफ्नो दृष्टिकोण प्रस्ट पारोस् त्यसपछि हामी पनि निर्णय गर्छौँ।” यसअघि आफ्नो नेतृत्वमा सरकार रहँदा ओलीले एमसीसी अघि बढाउन चाहेका थिए।
यसअघिका सभामुख कृष्णबहादुर महराले पनि एउटा अन्तर्वार्तामा आफूलाई ओलीले दबाव दिएको तर आफूले अस्वीकार गरेको बताएका छन्। ओलीले एमसीसीका अधिकारीहरूसँगको छलफलमा त्यो बेला आफूले अघि बढाउन खोजेको तर सभामुख लगायतका कारण त्यो अघि नबढेको बताए। ओलीको भनाइबारे जानकारी दिँदै छलफलमा सहभागी अर्का नेता राजन भट्टराईले भने, “हाम्रै पार्टीभित्र असहमति रहँदारहँदै पनि अघिल्लो सरकारले गरेको सहमति भए पनि अगाडि बढाउने कोशिश गरेका हौँ, सभामुख लगायत केही व्यक्तिको भूमिकाका कारण यो हुन सकेन।” तर अहिले आफू प्रतिपक्षमा रहेकाले भूमिका पनि फेरिएको धारणा ओलीले राखेको जानकारी उनले पनि दिए।एमसीसीका कारण दलहरूभित्र मात्र नभई असङ्गठित रूपमा भए पनि नागरिक स्तरमा पनि विभाजन देखा परेको हो। बीबीसी ।
एमसीसी बारे जान्नै पर्ने कुरा, एमसीसी पास भए के अमेरीकी सेना नेपाल आउला ?
२५ भाद्र २०७८, शुक्रबार ०६:३२ प्रकाशित